Yenza amakhadi oqhakamshelwano abelungiselelwe wena ngoQhakamshelwano neQR | Ndisuka mac
Yenza amakhadi oqhakamshelwano abhalwe wena kunye nabaQhagamshelwa kwiQR
Iikhowudi ze-QR ziba, nangona zihamba kancinci, indlela yokunikezela ngolwazi olujolise kumfanekiso, endaweni yoko ikhowudi. Iikhowudi ze-QR zisivumela ukuba singene kwiphepha lewebhu ngokukhawuleza ukusebenzisa ikhamera ye-smartphone yethu ngokwendalo, njengakwi-iOS 11, okanye ngokusebenzisa iqela lesithathu elinjenge-Google Chrome isiphequluli kunye neFirefox ye-iOS.
Olu hlobo lwekhowudi luluncedo kakhulu xa ubandakanya amakhadi oqhakamshelwano kwiminyhadala enjengeenkomfa, ukuze ube nakho ukufikelela kuyo yonke idatha yesithethi okanye undwendwe ngaphandle kokwenza imibuzo okanye ukukhangela kwi-intanethi. Ukwenza olu hlobo lwamakhadi kwiVenkile ye App yeMac sinesicelo soQhakamshelwano neeKhadi zeNkomfa zeQR.
Ukwenza olu hlobo lwamakhadi oshishino ngohlobo lwamakhadi okuchonga kunokuba yingxaki enkulu ukuba asinazo iindlela ezifanelekileyo kunye nenani lamakhadi ekufuneka siwenzile liphezulu. Enkosi kuNxibelelwano kwiiKhadi zeNkomfa zeQR esinakho yongeza okanye ungenise abafowunelwa kwaye wenze amakhadi oqhakamshelwano kunye neekhowudi zeQR ngokukhawuleza nangokulula.
Ukuba singenisa idatha kwifayile, sinokuyiguqula kubhabho ukuba kunyanzelekile. Yonke le datha inokugcinwa kamva ukuze iphinde isetyenziselwe imicimbi ezayo. Xa ungenisa idatha, isicelo siyasivumela ukuba sikwenze ngokuthe ngqo kusetyenziso lwabafowunelwa, kwifomathi ye-vCard okanye ye-CSV, iifayile zombhalo ezingenanto, ispredishithi okanye idatha egcinwe kwiMicrosoft Outlook.
Nje ukuba senze amakhadi, sinokuwuthumela ngaphandle umfanekiso kwifomathi ye-png, jpeg, tiff okanye pdf. Isicelo Uqhakamshelwano neeKhadi zeNkomfa zeQR ziyafumaneka simahla kwaye isivumela ukuba songeze ukuya kuthi ga kwimigca eli-10. Kodwa ukuba sinesidingo sokwandisa inani leerowu, kufuneka siphume.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Yenza amakhadi oqhakamshelwano abhalwe wena kunye nabaQhagamshelwa kwiQR